Izigungu zezikole zichitha eyokufundiswa kocansi - Ilanga News
Home Izindaba Izigungu zezikole zichitha eyokufundiswa kocansi
Izigungu zezikole zichitha eyokufundiswa kocansi
Owesigungu uthi ukugxiliswa kwezifundo zocansi kuzoyiqeda nya inhlonipho kubafundi
UMNU Ndo Matakanyana weNational School Governing Bodies
SISHAYA amakhala isigungu esilawula izikole kuzwelonke ngesiphakamiso
soMnyango wezeMfu-ndo eyisiSekelo mayelana nokufundiswa kwezingane ngezocansi ezikoleni, esiqhamuke emuva kwemibiko yokumitha kwezingane eziwu-23 000 eGauteng, njengoba izikole zinokuphazamiseka ngenxa yokubheduka kokhuvethe.
I-National Association of School Governing Bodies, ichitha umnyango ofuna kubuyekezwe i-curriculum ezifundweni zempilo, kugxi-lwe ngokwedlulele esifundweni socansi.
UMnu Ndo Matakanyana ongunobhala jikelele walesi sigungu, uthi ukugxiliswa kwezifundo zocansi ezikoleni, kuzoyiqeda nya inhlonipho kubafundi, bagcine bengabazi nokuthi bayini othisha.
Uthi ukuziphatha kwabafundi kuncike kubazali babo emakhaya, okuyibona okumele bafundise izingane indlela yokuziphatha.
“Simchithile ungqongqoshe (uNkk Angie Motshekga) ngale nto, kodwa yena uyaqhubeka nemihlangano yakhe yokuthi kubuyekezwe i-curriculum, kufa-kwe ucansi olujulile.
“Okufanele kwenzeke wukuthi kuqeqeshwe abazali ekutheni bakhulume nezingane zabo, hhayi ukuthi le nto iyofundiswa esikoleni ngoba kuzogcina sekulandela izigameko ezimbi ezizokwenzeka ezikoleni phakathi kothisha nabafundi, zisuswe wucansi lolu oluzofundwa kungasenamkhawulo.
“Le nto kayihlukile nokuthi abantwana sebenikezwa ilayisensi esemthethweni yocansi. Imfundo mayingathuthukeli ukuzobulala isizwe, lokhu okufundwa kwiLife Sciences neLife Orientation
sekwanele,” kusho uMnu Matakanyana.
Ukhuluma kanjena nje, uNkk Motshekga ubenomhlangano wezinsuku ezimbili kusukela
ngoLwesibili kwaze kwaba yizolo ngoLwesithathu nabaphathi bezikole nezigungu zazo eBirchwood Hotel,
eGauteng, kubhungwa lolu daba.
UNkk Motshekga uthi kabakwazi ukugoqa izandla ekubeni izinga lokukhulelwa kwabafundi linyuke ngalolu hlobo kusukela nyakenye.
“Ukukhulelwa kwabantwana kunomthelela omubi kakhulu ekubulaleni lokhu okuhle esi-kwakhayo.
“Kasikwazi ukuthula ngoba le nto izokwandisa nobubha obukhulu ezweni lethu. Kufanele abaholi bomdabu, abezenkolo nabazali babambisane kule nkinga.
“Ukukhulelwa kwabantwana kuphazamisa ngisho indlela yokukhula kwabo,” uNkk Motshekga.
Uveze ukuthi abafundi badinga ukunikwa ulwazi lwangempela ngokuziphatha okwamukelekile.
Ngokwesitatimende esikhishwe wumnyango, inhloso yokuhlangana kwabaphathi bezikole nezigu-ngu eGauteng, wukuthi kubhekwe ukubaluleka kwalolu daba nezi-nyathelo okumele zithathwe.
Previous articleZibhikishele isibhaxu nokuchashwa ngenhlamba izisebenzi zasePulazini
Next articleIbuyiselwe ehhovisi imenenja kamasipala